ဆောက်ထားတာ (၃) နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ ကျောင်းဆောင်မျက်နှာကျက်ပြိုကျလို့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ဒဏ်ရာရ – MEDIALANN
HomeLocalဆောက်ထားတာ (၃) နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ ကျောင်းဆောင်မျက်နှာကျက်ပြိုကျလို့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ဒဏ်ရာရ
posted on Sep. 26, 2019 at 6:10 pm
၂၂.၉.၂၀၁၉ ရက်​​နေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၄၅မိနစ်​မှာ စာသင်​​နေတဲ့ ​ကျောင်းသား​တွေအ​ပေါ် မျက်​နှာကျက် နဲ့ သံတန်း​တွေ ပြိုကျပါတယ်။က​လေး​တွေက​တော့ ဒဏ်​ရာ နည်း​ပေမယ့်​ လုံးဝဖရိုဖရဲဖြစ်​သွားတယ်​ကျွန်​​တော့်​အ​နေနဲ့ ​ပြောရရင်​ ကန်​ထရိုက်ကိုလိုင်​စင်​ပိတ်​သင့်​တယ်​… တကယ်​ကို ရင်​​လေးစရာဘဲ. ​နောက်​ထပ်​ နဝမတန်း ၊ ဒသမ တန်း စာသင်​​ဆောင်​ရဲ့ မျက်​နှာကျက်​​တွေလည်း အန္တရာယ်​ ရှိ​နေပါပြီ …
တာဝန်​သိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်​များ ​ကျောင်းသား​တွေရဲ့ အန္တရာယ်​ကိုအ​လေးထားပြီး လာ​ရောက်​ ကြည့်​ရှုပြီး၊ အကြံပြု​စေ၊ ကူညီ​စေချင်​ပါတယ်​… ပြီးစလွယ်​လုပ်​တဲ့သူ​တွေ၊ စစ်​​ဆေးတာဝန်​ယူတဲ့ သူ​တွေ အားလုံးမှာ တာဝန်​ရှိပါတယ်​. နိုင်​ငံ​တော်​က လုံ​လောက်​တဲ့ ​ငွေ​ကြေး​ပေးပြီး​သော်​လည်း တာဝန်​မ​ကျေတဲ့သူ​တွေ​ကြောင့်​အခုလိုဖြစ်​ရတာလို့ ယူဆပါတယ်ပညာရေးဌာနမှာ အဆောက်အဦးနဲ့ပတ်သတ်လာရင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ တင်ဒါခေါ်တာမျိုးမရှိဘဲ နီးစပ်ရာကုမ္ပဏီတွေက အဆောက်အဦးတွေ ကို တာဝန်ယူဆောက်လုပ်နေတာမျိုးတွေ ရှိနေပါတယ်။
ကျောင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အဆောက်အဦးတွေ ဆောက်လုပ်ခွင့်ကျလာပြီဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာကျောင်းအုပ်တွေက ဘာမှ သေချာမသိရဘဲ အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ပြီးစီးောကာင်း လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ရတွေတောင် ရှိပါတယ်. . .ဒီလိုဆောက်ပြီး ဘာမှ မကြာသေးခင် မိုးယိုလာတာတွေ ၊မျက်နှာကျက်ပြိုကျလာတာတွေ၊နံရံတွေ အက်ကွဲလာတာတွေ၊ သမံတလင်းတွေ အက်ကွဲပေါက်ထွက်လာတာတွေ ဖြစ်နေတဲ့ ကျောင်းဆောင်တွေ နိုင်ငံအနှံ့မှာ ရှိနေပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့ သေချာစိစစ် အရေးယူပေးသင့်ပါတယ်
Crd- Inthiran Thein
၂၂.၉.၂၀၁၉ ရကျနေ့ မှနျးလှဲ ၂ နာရီ ၄၅မိနဈမှာ စာသငျနတေဲ့ ကြောငျးသားတှအေပျေါ မကျြနှာကကျြ နဲ့ သံတနျးတှေ ပွိုကပြါတယျ။ကလေးတှကေတော့ ဒဏျရာ နညျးပမေယျ့ လုံးဝဖရိုဖရဲဖွဈသှားတယျကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ ပွောရရငျ ကနျထရိုကျကိုလိုငျစငျပိတျသငျ့တယျ… တကယျကို ရငျလေးစရာဘဲ. နောကျထပျ နဝမတနျး ၊ ဒသမ တနျး စာသငျဆောငျရဲ့ မကျြနှာကကျြတှလေညျး အန်တရာယျ ရှိနပေါပွီ …
တာဝနျသိတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျမြား ကြောငျးသားတှရေဲ့ အန်တရာယျကိုအလေးထားပွီး လာရောကျ ကွညျ့ရှုပွီး၊ အကွံပွုစေ၊ ကူညီစခေငျြပါတယျ… ပွီးစလှယျလုပျတဲ့သူတှေ၊ စဈဆေးတာဝနျယူတဲ့ သူတှေ အားလုံးမှာ တာဝနျရှိပါတယျ. နိုငျငံတျောက လုံလောကျတဲ့ ငှကွေေးပေးပွီးသျောလညျး တာဝနျမကတြေဲ့သူတှကွေောငျ့အခုလိုဖွဈရတာလို့ ယူဆပါတယျပညာရေးဌာနမှာ အဆောကျအဦးနဲ့ပတျသတျလာရငျ ပှငျ့လငျးမွငျသာစှာ တငျဒါချေါတာမြိုးမရှိဘဲ နီးစပျရာကုမ်ပဏီတှကေ အဆောကျအဦးတှေ ကို တာဝနျယူဆောကျလုပျနတောမြိုးတှေ ရှိနပေါတယျ။
ကြောငျးနဲ့ပတျသတျတဲ့ အဆောကျအဦးတှေ ဆောကျလုပျခှငျ့ကလြာပွီဆိုရငျ သကျဆိုငျရာကြောငျးအုပျတှကေ ဘာမှ သခြောမသိရဘဲ အဆောကျအဦးဆောကျလုပျပွီးစီးောကာငျး လကျမှတျထိုးပေးလိုကျရတှတေောငျ ရှိပါတယျ. . .ဒီလိုဆောကျပွီး ဘာမှ မကွာသေးခငျ မိုးယိုလာတာတှေ ၊မကျြနှာကကျြပွိုကလြာတာတှေ၊နံရံတှေ အကျကှဲလာတာတှေ၊ သမံတလငျးတှေ အကျကှဲပေါကျထှကျလာတာတှေ ဖွဈနတေဲ့ ကြောငျးဆောငျတှေ နိုငျငံအနှံ့မှာ ရှိနပေါတယျ။
သကျဆိုငျရာအနနေဲ့ သခြောစိစဈ အရေးယူပေးသငျ့ပါတယျ
NYU September 26, 2019
မနွယ်နွယ်ဝင်း ( ခေါ်) ဆင်မကြီးရောက်ရာ အရပ်မှ အမြန်ပြန်လာပါ
နိုဝင်ဘာ ၂၉ သပိတ်ကျင်းငလျှင်လူပ်ခတ်မှု မြင်ကွင်းများ
စစ်တပ်အနေနဲ့ စစ်ကြောင်းမထွက်မီ ကြိုတင်ရှင်းလင်းပြီးမှ ထွက်သင့်ပါတယ်
သောကြာနေ့ Result Show မှာတော့ အထူးဧည့်သည်တော်အဖြစ် စည်သူလွင် သီဆိုဖျော်ဖြေမည်
“စိုးလွင်လွင်ရဲ့ သီချင်းကို Variation အနေနဲ့ ပြန်ဆိုတဲ့ အက်စတာကတော့ လုံးဝ ကြောက်စရာ ကြီးပါ”
Archives Select Month December 2019 November 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018
Flame Test Lab Report Secrets
Computer Science Undergrad Ranking – the Story
Top Mathematics Major Curriculum Guide!